Interview with Gokul Baskota | हामी काभ्रेली मतको मात्र होइन मनको पनि प्रतिनिधित्व गर्छाैं
मेचीकाली : 2017-11-13 13:18:09
गोकुल बाँस्कोटा, उम्मेदवार
प्रतिनीधि सभा, क्षेत्र नं. २ काभ्रे
गोकुल बाँस्कोटा नेकपा एमाले केन्द्रीय स्कुल विभागका सदस्य हुन् । युवा नेता बाँस्कोटा यसअघि नेकपा एमाले काभ्रेका अध्यक्षसमेत थिए । हाल बाम गठवन्धनबाट प्रतिनिधिसभा काभ्रे क्षेत्र नंवर २ मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बाँस्कोटासँग उनको चुनावी एजेण्डा लगायतका विषयमा नवराज बजगाईले गरेको कुराकानीको संक्षेप :
– सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्नुको राज र संकेत के देख्नुहुन्छ ?
यो सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताहरुले माया गरेको नेतृत्वले पनि सद्भाव प्रकट गरेको, मेरा कामहरुको पनि मूल्यांकन भएको र काभ्रेली जनताको सेवा गर्नुपर्ने दिन आएको शुभ संकेतको रुपमा मैले यसलाई लिएको छु ।
– तपाई खरो नेता कि निडर नेता ?
तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? म आफ्ना नीतिहरु, आफ्ना पार्टीका दृष्टिकोणहरु, जनताका विषयवस्तुहरु र मुद्धाहरु नलुकाइकन, नढाँटीकन, सिधै सबैले बुझ्ने गरी भन्दछु र हुँदै नहुने गलत, नचाहिने कुरा, अनुचित कुरालाई समय दिनुपर्छ, त्यसको निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । असल, न्यायपूर्ण कुराहरुमा म सधैं उभिन्छु । म त्यसबेला पार्टी पनि भन्दिन । तपाईहरुलाई म कयौं दृष्टान्त दिन सक्छु । म पार्टी भन्दा पनि न्याय र अन्याय हेर्छु, ठिक र बेठिक हेर्छु, सत्य र झुठ हेर्छु । यी सबै बिचको लडाईमा म सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा उभिन्छु । तर सबैलाई चित्त बुझ्दैन किनभने हाम्रो समाजमा सबै चिजहरु छ । यो त ३ कोटी जनता ३३ कोटी देवता भएको मुलुक हो । देवतामा त चित्त बुझ्दैन भने म त एउटा मान्छे हो नि । त्यसमाथि पनि विचार र दृष्टिकोण बोकेको पार्टीको कार्यकर्ता हो नि । त्यसैले मलाई कयौंले मनपराउनु हुन्छ, कयौंले मनपराउनु हुन्न । तर म आफ्नो मुद्धामा स्पष्ट छु ।
– धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ, आफ्नो अनुभवलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
पहिले त काभ्रेली जनताले कामको अवसर दिनुप¥यो । मौका नै नपाई मैले के के गर्छु भन्ने उचित पनि होइन । तर जनताको बिच उठेका मुद्धाहरुको बारेमा सोध्न खोज्नुभएको हो भने त्यस विषयमा मसित कुनै निर्वाचन क्षेत्र २ को मात्रै कुरा छैन, समग्र काभ्रेली जनताको समग्र भेग र बस्तीको, सम्पूर्ण भाषा र समुदायको, सम्पूर्ण जाति र लिंगको र समग्रमा तिनको हितको निम्ति हामीले विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्काे गरेका छौं र त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ, प्रतिबद्धता छ ।
– मुख्य मुद्धा के के हुन् ?
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उच्च प्रकृतिका चुनावहरु पनि हेरेका छौं । हाम्रो देशमा मुद्धाको आधारमा फैसला हुन्छ वा व्यक्तिको आधारमा फैसला हुन्छ । मुद्धा स्पष्ट छन् । बामगठबन्धनले अगाडि सारेको केन्द्रीय चुरो कुरो के हो भने समाजवादको यात्रा, खुशीयाली र समानता सहितको लोकतन्त्र प्रयोगमा हामी जाँदै छौं । त्यसो हो भने बाटो समृद्धिको बनाइसकेपछि समाजवादको बाटोको उद्देश्य समृद्धिको हुन्छ । समृद्धिको बाटो हो भने हाम्रो काम के हो ? त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, अबको बाटो समाजवादको, अबको यात्रा समाजवादको, अबको काम निर्माणको यो दुईटा कुरा हो । त्यसभित्र हाम्रो जिल्लालाई सबैभन्दा बढि उत्पादनको जिल्ला बनाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान र तिनको यथोचित दोहन गर्ने कुरा सबै देशहरु त्यहि आधारमा समृद्ध भएका छन् । रसियाको हिराखानीको कुरा गर्नुस् या तेलको कुरा गर्नुस् । अमेरिकाको सफ्टवेयर वा इनोभेसन जे कुरा गर्नुस् । उनीहरु आफूसँग भएको मानवीय क्षमताको उच्चतम प्रयोग र भौतिक चिजहरुको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहनद्वारा अगाडि बढिरहेका छन् ।
हाम्रो जिल्लामा सुन्दर फाँटहरु छन्, सुन्दर बस्ती छन् र नदीहरु छन् । त्यसैले यो जिल्लालाई उत्पादनको जिल्ला बनाउने हो । खास गरीकन मण्डन र पाँचखाल कृषिको एउटा उच्च स्तरको कृषि हाइ भ्यालु भएका चिजहरुको उत्पादन गर्ने र बेच्नको निम्ति बाहिर जानै परेन, काठमाडौंमा नै ५÷७ वटा फाइभस्टार होटलहरु छन् । ती सबैका लागि महँगा चिजहरु उत्पादन गरेर यहाँको जीवन बदल्न सक्छौं । त्यस्तै पर्यटनभित्र जलपर्यटन पनि छ र हाम्रो उद्योगधन्दा खोल्ने ठाउँ पनि पर्याप्त छ । संसारमा यस्तो ठाउँ देखेको छैन जहाँ देशको केन्द्रीय राजधानीको ४– किलोमिटरभित्र अहिले पनि सस्था जमिनहरु पाइन्छन् र लगानीकर्ताहरु त्यहाँ आएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले लगानी आकर्षित गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगमा जोड्ने कुरा परम्परागत कृषिलाई तोड्ने औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसबाट हामीले समृद्धि हासिल गर्ने हो । सानातिना बाटाघाटा, कुलकुलेसा यो कन्टिन्यु बन्छन् । खानेपानी आदि समस्या बनि नै हाल्छन् । यसमा खरो बामपन्थीहरु उत्रेका छन्, अझ एमालेहरु झन् उत्रेका छन् । त्यसैले यो अवसरको खेर हाल्नुहुँदैन र हाम्रो जिल्लामा कृषि, पर्यटन र अन्य सेवाहरुमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छाैं । यो हाम्रो मुख्य मुद्धा हो ।
– प्रदेश नं. ३ को राजधानी काभ्रेमा ल्याउने कुरा भइरहेको छ, तपाईंहरु भयो भने यो सम्भव छ ?
प्रादेशिक सभाको केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने कुराको निम्ति हामीले के सोच्नुपर्छ भने हामीले नयाँ आर्थिक केन्द्रहरु जन्माउनुपर्छ । रोजगारीको सिर्जनाको निम्ति, समृद्धिका लागि । प्रदेश बन्न यो भन्दा उपयुक्त ठाउँ नै छैन । पूर्वी जिल्लामा आउन जान पनि सजिलो, हाम्रो पूर्वाधार पनि भएको, नयाँ आर्थिक केन्द्रको रुपमा पनि विकास हुन सक्ने र काठमाडौंको चापलाई पनि यसले कम गर्न सक्ने, स्मार्टसिटिमा पनि मदत पु¥याउन सक्ने कुराहरु भएकोले सबैलाई पायक पर्छ । त्यसैले हाम्रोमा भएको पूर्वाधारलाई चलाउनुपर्छ, नयाँ आर्थिक केन्द्र बनाउनुपर्छ । यसलाई सबैले समर्थन गर्नुप¥यो, लबिङ गर्नुप¥यो । हामीसँग भएको पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो ।
– तपाईहरुले जित्ने बितिकै जनताहरुले के पाउँछन् त ?
तपाईले आफ्नो छुट्टै कल्पना गर्ने चिज घर हो । कल्पना नगरी तपाईको घर बन्दैन । कस्तो खालको घर बनाउने भन्ने कुरा तपाईको आर्थिक क्षमतामा भर पर्छ । तर सपना नै नदेख्ने मानिसले भौतिक उपभोग कसरी गर्छ ? त्यसैले मान्छेले ठूला ठूला उद्देश्य लिनुपर्छ, कल्पना गर्नुपर्छ । यो कुनै रमाइलोको निम्ति उठाएको होइन, गर्न सकिन्छ भनेर उठाएको हो । हावाबाट बिजुली निस्किन थाले कि थालेन ? साधारण कुरा, पूर्व पश्चिमको रेलवेको प्रक्रिया सुरु भयो कि भएन ? यो महत्वकांक्षी थियो कि थिएन ? कसै न कसैले त गर्नुप¥यो । हाम्रो राष्ट्र हामी बनाउँछौं । ५– लाख युवाहरु विदेश गएर अर्काको देश बनाउने, हाम्रो घरलाई बाँझै राख्ने, हाम्रो समाज भताभुङ्ग बनाउने यो हुन सक्दैन । त्यसैले यो कुनै आकांक्षा होइन, उद्देश्य हो, महत्वकांक्षा होइन, दृढता हो, लक्ष्य हो । त्यसैले हामीलाई मौका चाहियो, हामी गरेर देखाउँछौं । जनताले बामगठबन्धनलाई मत दिनु, हामी जनतालाई समृद्धि दिन्छौं ।
– महत्वकांक्षा देखाएर बामगठबन्धनले जित्यो भने अधिनायकवाद लाग्न सक्छ भन्ने विपक्षीहरुले हल्ला गरिराखेको अवस्था छ, यो के हो त ?
राणा फाल्दा काँग्रेस एक्लै थियो ? पञ्चायत काँग्रेसको एक्लो बुत्तामा गएको थियो ? राजाको बिदाई काँग्रेसको इच्छा र उद्देश्य लक्ष्य भित्रको विषय थियो ? ति सबै कुरामा बामपन्थी कहाँ थियो, काँग्रेस कहाँ थियो ? हामी सँगै थियौं, एकसाथ यो काम ग¥यौं । जन्मेको दिनदेखि लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टीलाई अधिनायकवाद लाग्ने ? के एमालेलाई बामगठबन्धनलाई पोलपोट भन्ठानेको ? यो मदन भण्डारीले प्रशिक्षित गरेको, स्कूलिङबाट हुर्केको एमालेको पुस्ता हो । माओवादीले पनि २१ औं शताब्दीको जनवादी हो भनेर मोडिफाइ गरिसक्यो । त्यसैले यस्ता भ्रममा पर्नुहुन्न । बरु आधा रातमा बचेकुचेको लोकतन्त्र पनि दरबारमा किस्तिमा लगेर बुझाउनेहरुलाई सोध्नुपर्छ, अधिनायकवाद कसले ल्यायो ? त्यो कुरा फर्केर इतिहासमा हेर्नुपर्दैन ? माना चामल सबै सकिएपछि अर्काको कुरा गरेर स्याल हुइइयाँ मच्चाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो । यस्तो भ्रममा कोही पनि पर्दैन, नेपालका कम्युनिष्टहरु भन्दा बढि लोकतन्त्रवादी कोही पनि छैनन् । विधिको शासन, कानूनको शासन, संविधानको सर्वाेच्चता, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, समानता, सबैलाई अवसर के यो लोकतन्त्र होइन ? यो भन्दा बढी लोकतन्त्र के हुन्छ ? त्यसैले जसले लोकतन्त्रका निम्ति लड्दालड्दै यहाँ आयो, त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्नु काँग्रेसको चरित्र नै हो । –१७ सालमा दुई तिहाइको सरकार पनि टिकाउन सकेन । अवसर पाउँदा अयोग्यता प्रदर्शन गर्ने, सधैं एउटै उद्देश्यमा घाँटी उठ्याउने काँग्रेसको तरिका त्यो हो र कथित लोकतन्त्रवादीबाट आएको यस्तो स्याल हुइइयाको पछाडि आजको २१औं शताब्दीको चेतना र अभ्यासले त्यो भ्रमको पछाडि लाग्छ भन्ने मलाई केही पनि लाग्दैन ।
– काभ्रेली मतदाताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीलाई सहयोग गर्नुस्, गर्दै पनि आउनुभएको छ । हामीले सकेजति काम गरेका छौं । कछुवाको गतिमा होइन, पूरै दुर्घटना नपरीकन दौडेर देश विकासको एजेण्डामा काम गर्ने हो । अर्काको समृद्धिमा बसेर ¥याल काटेर अब नेपाली समाजलाई खुशी, समृद्धि राख्न सकिँदैन । छिमेकीको घरको राम्रो बास्ना खाएर बाँच्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो घरमा राम्रो बास्ना दिन सक्ने खालका फलपूmलहरु, चौरासी व्यञ्जन तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ । निर्माण गरौं, हामीले अवसर कम पाएका छौं । अवसर थोरै पाउँदा पनि यो देशमा निर्माणको जागरण पैदा गर्ने शक्ति, सामथ्र्य छ । त्यसैले निर्माणको, स्वाधिनताको, सम्पूर्ण नेपाली मतहरुको मात्र होइन, नेपाली मनहरुको प्रतिनिधि गर्ने तागत, क्षमता, हैसियत र योग्यता देखाउँदै आएका छौं । त्यसैले हामीलाई ९÷९ महिनामा फेरिने सरकार होइन ५ वर्ष सम्म कुनै पनि मध्यरातमा उठ्ने प्रेतहरुले पनि भुत प्रेत जगाउँदा पनि नहलिने सरकार चाहियो । त्यसको लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले फैसला गरिदिनुप¥यो । हामीले जनताले दिने निर्णय सहश्र स्वीकार्दै आएका छौं र अब पनि स्वीकार्ने छौं र हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु ।
(फेवा टाइम्स टिभीका लागि नवराज बजगाईंले गरेको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप । पूरा भिडियो हेर्नका लागि युट्युबमा गोकुल बाँस्कोटा सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ ।)